Maxay u baahan tahay Kooxda Liverpool si ay ula saxiixato Thiago Alcantara?? – Gool FM
Maxay u baahan tahay Kooxda Liverpool si ay ula saxiixato Thiago Alcantara??
Haaruun September 15, 2020
(Liverpool) 15 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa u baahan inay sugto illaa todobaadka ugu dambeeya ee suuqa kala iibsiga xiddigaha si ay ula saxiixato Thiago Alcantara.
Liverpool ayaa lagu soo warramayaa inay sugi doonto illaa iyo isbuuca ugu dambeeya ee suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga ka hor inta aysan dalab rasmi ah ka gudbin ciyaaryahanka khadka dhexe ee Bayern Munich, Thiago Alcantara.
Reds ayaa weli ah kooxda ugu cadcad saxiixa ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain, inkastoo kooxda ay xafiiltamaan Premier League ee Manchester United ay goor dambe soo bandhigtay xiisaha ay u qabto laacibkan.
Yeelkeede, Bayern Munich ayaan weli helin wax dalab rasmi ah oo ay ka soo gudbiyeen 29 jirkaan, waxaana ay si cad uga digtay kooxaha inayna wax ganacsi ah ka sameynin dhammaadka suuqa kala iibsiga.
Sida ay warinayso Jariiradda talkSPORT qorshaha Liverpool ayaa ah inay sugto isbuucyo kale sababo la xiriira hubanti la’aan mustaqbalka ciyaaryahankeeda khadka dhexe ee Georginio Wijnaldum.
Wijnaldum ayaa la rumeysan yahay inuu diiradda u saaran yahay tababarihiisii hore ee Holland, Ronald Koeman kaasoo hadda ah macallinka Barcelona, iyadoo laga yaabo inuu ka tago kooxda haysata horyaalka Ingiriiska.
Kooxda Manchester City oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Kylian Mbappe
RASMI: Aubameyang oo heshiis cusub qalinka ugu duugay Kooxdiisa Arsenal... (Meeqa sano ayuu u saxiixay Gunners?)